Acer Days 2018
HomePromotionAcer Days 2018
“ လာနေပြီ “
Acer မှ Acer ပဲသဘောကျတဲ့ Acer ချစ် ကွီးတို့ ၊ မွီးတို့အတွက် အရမ်းအရမ်းတန်တဲ့ Promotion တစ်ခုလာနေပါပြီလို့..
ဟဲဟဲ..အလန့်ထညက်များဖြစ်သွားကြလား အက်ဒ်မင်က Acer ချစ်ပရိသတ်တွေ မြန်မြန်သိအောင်ပြောချင်ဇောနဲ့ဆိုတော့ မရှင်း မရှင်းဖြစ်သွားတာ..
ခုတော့ရှင်းသွားပြီထင်တယ်.. ဒါဆိုအရမ်းအရမ်းတန်တဲ့ Promotion အကြောင်းဆက်ပြောမယ်..
“ Acer Days “ ဆိုတဲ့ ခပ်ဆန်းဆန်းနာမည်လေးနဲ့ Acer ချစ်သူတွေအားလုံးသဘောကျမဲ့ Promotion လေး အဲ့ဒီ “ Acer Days “ Promotion မှာ Acer Notebook ဘယ်မော်ဒယ်ကိုဝယ်ဝယ် ချက်ချင်းနှိုက်ချက်ချင်းပေါက်မဲ့ Instant lucky draw ကူပွန်တွေရရှိမှာပါ။
အမ်..Instant lucky draw ကူပွန်လောက်နဲ့တော့ အရမ်းအရမ်းတန်တဲ့ Promotion အက်ဒ်မင်လာနောက်နေတာလား အဲ့လိုတွေးနေပြီဆိုရင် ၀ယ်ယူတဲ့ Notebook Model ရဲ့ လစဉ် Promotion cash back ကိုပါ * Double Chance * အနေနဲ့ခံစားခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် Lucky draw ကူပွန်ထဲမှာပါတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကိုမသိသေးတာကြောင့် လို့ဆိုပြီးနားလည်ပေးလိုက်ပါမယ်။ (အလဲ့..အလဲ့) ကဲ..ဒါဆို Lucky draw ကူပွန်ထဲမှာဘယ်လိုလက်ဆောင်လေးတွေပါမလဲ?
** cash back 10 USD**
** cash back 15 USD**
**Acer Rain Coat**
Acer Phone Bag
Acer Water Bottle
SLN Memory Card (4GB)
Kingston (16GB) ပါဝင်မှာပါ..
ကဲ.ဒီလောက်ဆို “ Acer Days” Promotion က Acer ချစ်သူတွေအတွက် အရမ်းအရမ်းတန်တဲ့ Promotion ဆိုတာအထူးပြောမနေတော့ဘူး..
ဒါနဲ့ Promotion အကြောင်းတော့သိရပြီ။
ဘယ်နေ့ နဲ့ ဘယ်ဆိုင်တွေမှာ ဒီ “ Acer Days “ Promotion နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မလဲ
ဇူလိုင်(၂၀) ရက်ကနေ (၂၂) ရက်နေ့အထိ
iDEA LiNK iT & Mobile
No.182,Seikkanthar Street(Middle Block),
Kyauktadar Township,Yangon ( Ph.no 01-376212 / 09-73026840)
EASTERN iT & Mobile
(No.(167-175)(G4),Seikkanthar Street(Lower Block),
Kyauktada Township,Yangon (Ph.no 01-377259)
MyCom Computer Technology
(No.(15/A).Corner of 32 & 77 Street.
Mandale, Mandalay, Burma) (Ph.no 02-69309)
ဇူလိုင်(၂၇) ရက်ကနေ (၂၉) ရက်နေ့အထိ
UNiQUE It & Mobile Center(Hlaing)
(No.31, Insein Road ,Ward 9,Junction of Insein &
Kan Road Hlaing Township ,Yangon) (Ph.no 01-2305401,2305402,2305403)
Asia Tech IT & Mobile
(No.(130),Seikkanthar Street (Lower),Yangon,Myanmar.) (Ph.no 01-374110, 09-972,888,160)
Technoland (Hledan) (Hledan Center) ????
သြဂုတ်(၃) ရက်ကနေ (၅) ရက်နေ့အထိ
MAT (No.61/A, 27th Rd, Bet: 73rd & 74th St.
Mandalay) (Ph.no 09-5153419)
Linn Computer (No(11/7), Bo Gyoke St, Naypyitaw. No.117, Thapyaykone, Naypyitaw. No(14/585),4Str,PaungLaung, Naypyitaw.) (Ph.no 067-22884, 09-43018044) နဲ့
(No.10, Bo Gyoke St, San Daw Region, East of Pyay Train Station) (Ph.no 09-792626350, 053-26350, 09-796999947( Mr ),09-785326350 ) ????
သြဂုတ်(၁၀)ရက်ကနေ (၁၂) ရက်နေ့အထိ
Smart IT & Mobile
(No.158, 36th St (Middle Block),
Kyauktada Tsp. Yangon. Myanmar) (Ph.no 01-256636)
King Service Wisdom (KSW)
ဖုန်း ၀၁-၈၃၉၈၀၃၇ , ၂၄၆၈၃၇ ,၀၉၃၀၂၂၇၇၈၈,၀၉၃၁၀၄၀၄၅၆
သြဂုတ်(၁၇) ရက်ကနေ (၁၉) ရက်နေ့အထိ
ICE Computer & Mobile
(အမှတ် (၄၇) ၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။) (Ph.no (09) 774266830 , (09) 262600418
(01) 231 6484 , (01) 231 4808)
Acer Days 2018 Road Show
Date- July 27 ~ 29
Location – UNiQUE It & Mobile Center (Hlaing)
Date- August3~ 5
Location – KMD (Pansodan)
Citicom (Bar Street)
Wise Power (Pyay)
“ Acer Days” Promotion ကိုခံစားဝယ်ယူနိုင်မှာပါ..
ကဲ..ဒီတော့ Acer ချစ်ပရိသတ်တွေ ဒီလိုအရမ်းတန်တဲ့ Promotion ကိုလက်မလွှတ်လိုက်ရအောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားပြီး အရည်အသွေးကောင်း Acer Notebook တွေဝယ်ယူရင်း “ Acer Days “ Promotion လေးကိုခံစားလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။